4 Codsi oo Lagu Dayactirayo Sawirada Burbursan Isla Markaana Lagu Soo Celiyo | War gadget
Maxaa dhacaya markii sawirradeennii lagu keydiyay CD-ROM oo uu isagu isagu leeyahay qaybo xun? Hagaag, waxaan si fudud ku bilaabi karnaa inaan ka qoomameyno inaanan sameynin keyd dheeri ah, maxaa yeelay waa la dhahay sawirro ama sawirro ayaa la dejin karaa "qaybaha xun" sidaa darteed waa wax aan macquul aheyn in la isku dayo in si fudud looga soo kabsado. Sida aan awoodno dayactir sawirada burburay Xaaladahan?
Dusha sare ayaanu dhignay sawir natiijadiisu noqon karto waxa muuqaalka muuqaalka Windows-ka guud ahaan muujiyo markuu helo noocyada faylasha cilladaysan. Haddii aad isku aragtay xaaladan murugada leh oo aad qarka u saaran tahay inaad ku tuurto diiwaanadan halka aad haysato tiro badan oo sawirro muhiim ah (qoys ama shaqo) Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aqriso qodobka soo socda, maxaa yeelay halkan waxaan ku xusi doonaa dhowr codsi oo aad u isticmaali karto si aad isugu daydo inaad ku soo ceshato sawirada. Midkood waa bilaash, halka kuwa kale ay tahay in la iibsado, in kasta oo nooca qiimeynta la soo degsan karo si loo arko natiijada iyo waxtarka aaladda hawsha la saaray.
1 Tixgelinno hordhac ah kahor dayactirka sawirrada burburay
2 Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada dhaawacmay
2.1 Xidigaha Phoenix JPEG Dayactirka 2
2.2 Sawir Dhaqtar
2.3 Dayactirka Faylka
2.4 Soo kabashada
3 Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee Mac
3.1 Soo kabashada Sawirka Stellar Phoenix
3.2 Soocelinta iSkysoft Data
3.3 Soo Celinta Xogta OneSafe
4 Barnaamijyo lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee Android
4.1 Soo-kabashada Sawirka
4.2 Soo Celinta Sawirada
4.3 Soo Celso Sawirada La tirtiray
5 Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee iPhone-ka
Tixgelinno hordhac ah kahor dayactirka sawirrada burburay
Waxaan falanqeyneynaa kiiska gaarka ah ee aan hayno sawirro ama sawirro ku keydsan saxanka CD-ROM, kuwaas oo yeelan kara qaybo xun. Xaaladda sidoo kale waxay ku dhici kartaa faylasha lagu martigeliyay usha USB-ga ee leh darawalka adag iyo in, si kastaba ha noqotee, si fudud looguma soo bandhigi karo daawadayaasha sababo la xiriira dhaawacyo qariib ah oo laga yaabo inay sababeen infekshanka koodhka xun.
Wax kastoo xaalad ah oo timaada ka hor inta aan la dayactirin sawirada burburay, waa inuu isticmaalaha isku day inaad nuqul ka sameysid sawirradan (faylasha xun) meel kale kumbuyuutarka wadista adag sababtoo ah halkaas, way fududaan doontaa inaad isku daydo inaad ka soo kabato sawirrada dhaawacmay ama aad dayactirto.
Hoos waxaad ka heli doontaa qalab taxane ah oo kaa caawin doona soo kabso sawirada burburay.
Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada dhaawacmay
Xidigaha Phoenix JPEG Dayactirka 2
Qalabkan lagu dayactirayo sawirrada dhaawacmay ayaa naga caawin kara ujeeddada la soo jeediyay, in kasta oo ay tahay in lagu iibsado shati rasmi ah. Sida laga soo xigtay soo-saaraha, soo-jeedintiisa ayaa leh suurtagalnimada in la dayactiro feylasha muuqaalka ee qaab jpeg ah iyo kan hadda, waxaa loo muujiyey inay kharribmeen ama waxyeelloobeen.
Codsigan wuxuu yeelan karaa suurtagalnimada inuu awood u yeesho inuu soo ceshado macluumaadka sawirradan xitaa haddii nidaamka hawlgalka (Windows) uu ku taliyay farriimo kala duwan, in faylka ayaa gebi ahaanba dhaawacmay. Marka laga hadlayo isku xirnaanta shaqada, waxaan kaliya u baahanahay inaan doorano sawirrada (faylasha waxyeelloobay) si aan ugu jiidno qalabka qalabka ka dibna riix badhanka si aan u bilowno hawsha dib u soo celinta.
Qalabkan waxaan sidoo kale lahaan doonnaa suurtagalnimada kala soo bax macluumaadka faylalka sawirka, kaas oo bixiya beddelaadyo ka wanaagsan oo lagu fuliyo hawshan. Waxaa laga yaabaa in dhinacan awgood, ay tahay in kharashka shatiga lagu bixinayo isticmaalkiisu uu aad uga badan yahay soo jeedinta aan horay u soo sheegnay.
Waxtarka shaqada ee ay soo bandhigtay qalabkani waa mid weyn, maaddaama oo keliya faylasha laguma soo celin karo jpeg laakiin sidoo kale, Windows-ka hooyo (BMP) iyo xitaa, nooca PSD, ahaanshaha astaantan mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kuwa ka shaqeeya Adobe Photoshop ama aalado qaabeysan oo qaabeysan. Si aad u hubto hawlgalkeeda waxaad ku tijaabin kartaa aaladda fayl cilladaysan oo ah mid aad muhiim u ah, in kasta oo aad ka heli doontid calaamadeynta sawirka faylka la soo celiyey.
Shaki la'aan, Dhakhtarka Sawirku waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican kabsado sawiro waxyeelo.
Si aad u soo dejiso - Sawirka Dhakhtarka 2
Xaqiiqdii, beddelkan ayaa loogu talagalay inuu isku dayo inuu dayactiro noocyada kala duwan ee faylasha, taas oo aan marka hore ku lug lahayn sawirrada laakiin halkii, qaabab gebi ahaanba ka duwan. Faa'iidada ugu horreysa waxay ku jirtaa mahadnaqdeeda, ahaanshaha beddelka ugu horreeya ee ay tahay inaan bilowno adeegsiga si aan u aragno haddii sawirradeenna faylalka ama faylalka lihi ay leeyihiin boqolkiiba in yar oo xalka ah
Iswaafajinta ay qalabkani keydinayaan wuxuu ula jeedaa labada feylal sawir ee ku jira jpeg iyo sidoo kale dukumiintiyada PDF, faylasha muusikada, feylasha fiidiyowga, dukumiintiyada Xafiiska iyo waxyaabo kale oo badan. Iskuxirku waa mid fudud oo sahlan in la isticmaalo, maaddaama ay tahay oo keliya inaan helno meesha uu ku yaal sawirka ama faylka waxyeellada leh ka dibna riix badhanka si loo bilaabo hawsha dib u soo celinta.
Ma heshay Dayactirka Faylka dayactir sawirada burburay?
Si aad u soo dejiso - Dayactirka faylka 2.1
Beddelkan lagu dayactirayo sawirrada burburay sidoo kale waa in lagu iibsadaa ruqsad rasmi ah. Iswaafajinta ayaa waxoogaa ka ballaadhan wixii codsiyada hore ay bixiyeen inkasta oo, loogu talagalay oo keliya faylasha sawirrada leh qaybo musuqmaasuq ah (waxyeello leh).
Iswaafajinta waxaa loola jeedaa feylasha sawirka qaab ahaan jpeg, bmp, tiff, gif, png iyo ceeriin, Markaa waxaan noqon karnaa bedel wanaagsan maxaa yeelay iyada ayaa leh, waxaan leenahay ficil fiican oo wax looga qabto daaweynta dhibaatooyinka noocan ah.
Mid kasta oo ka mid ah beddelka aan soo sheegnay, waxaad isku dayi kartaa inaad soo ceshato sawirrada laga yaabo inay ku jireen meel dhexdhexaad ah oo qaybtoodu ay waxyeello gaadhay. Aad bay muhiim u tahay in la isku dayo isticmaal noocyada tijaabada intaadan bixin liisanka maxaa yeelay marna ma ogaan doontid haddii aan sameyn doonno natiijooyin wax ku ool ah runtii in kasta oo sheegashada ay horumariyayaasheedu sameyn karaan.
Si aad u soo dejiso - Soocelinta 3
Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee Mac
Soo kabashada Sawirka Stellar Phoenix
Codsi aad u fiican, oo ka socda isla barnaamijyada sida Windows-ka kor lagu soo sheegay, oo noo ogolaanaya kaliya inaan ka soo kabano dhamaan sawirada ku yaal qeybaha xun ee darawalkeena adag ama kaarka xusuusta, laakiin sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo kabano wixii fiidiyow ama fiidiyow ah.
Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ka soo kabano sawirro, fiidiyowyo ama faylal muusig oo aan horey u tirtirnay, sidaas darteed noqon kara halbowleheena ku habboon nooc kasta oo xaalad ah oo xusuusteennu ay saameeyeen tayada liidata ee nidaamka kaydinta ama sababta oo ah waxa ku dhaawacmay waqti ka dib.
Soo Degso Soo Celinta Sawirka Sawirka 'Stellar Phoenix Photo'
Soocelinta iSkysoft Data
Tani waa codsi kale, oo ay weheliso kii hore, oo bixiya natiijooyinka ugu wanaagsan ee ku jira nidaamka deegaanka ee desktop-ka 'Apple desktop'. iSkysoft Data Recovery waxay noo ogolaaneysaa inaan si ficil ah u soo ceshano feylal kasta oo ku jira qeybta cilladaysan ee kaarka diskiga adag ama kaarka xusuusta, oo ay ku jiraan sawiro, fiidiyowyo, emayl, dukumiintiyo, feylal muusig ... waxay ku habboon tahay qalab kasta oo aan ku xirno kumbuyuutarkeenna, sidaa darteed waxaan sidoo kale u adeegsan karnaa si aan uga soo ceshano macluumaadka kamarad isku dhafan oo leh xusuus gudaha ah ama terminal-ka Android-ka oo sawirrada iyo fiidiyowyada la soo kabanayo ay ku yaalliin xusuusta qalabka.
Soo Degso iSkysoft Data Recovery
Soo Celinta Xogta OneSafe
Waxaan ku dhammeyneynaa xulashooyinka si aan uga soo kabanno sawirrada ama fiidiyowyada waxyeellada leh ee qalabkeenna leh OneSafe Data Recovery, oo ah codsi sidoo kale noo oggolaanaya inaan ku xirno qalab kasta oo ka socda Mac-keena si aan uga soo kabanno macluumaadka gudaha ku jira, haddii ay yihiin sawiro, fiidiyow ama dukumiinti noocuu doono ha ahaadee.
Soo Degso Soo Celinta Taariikhda OneSafe
Barnaamijyo lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee Android
Nidaamka deegaanka ee Android wuxuu na siiyaa tiro badan oo codsiyo ah marka laga hadlayo soo kabashada sawirada burburay ama wixii macluumaad kale ee musuqmaasuq ah ee ka imanaya terminalkeena, maadaama aan marin u leenahay asalka nidaamka waqti kasta, wax aanan ku sameyn karin nidaamka deegaanka ee mobilada. Manzana. Waqti ka dib, xusuusta kaydinta ayaa sii xumaanaysa, gaar ahaan haddii aysan ka soo jeedin magac caan ah, markaa marwalba waxaa lagugula talinayaa inaad wax yar ku lumiso maal gasho nabadgelyadeenna maskaxeed.
Codsiga Soo Celinta Sawirka wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo ceshano sawirada laga helay qeybaha xun laba hab Taas oo aan ku helayno natiijooyin aad u wanaagsan, in kasta oo haddii xusuusta meesha sawirradu ku yaalliin ay si xun u dhaawacan tahay, codsigan iyo mid kale toona ma samayn karo mucjiso. Habka koowaad wuxuu adeegsadaa algorithm ka soo kabashada waa midka na siiya natiijooyin si dhakhso leh oo wax ku ool ah. Midka labaad ayaa lagu talin karaa marka ugu horeysa uusan bixin natiijooyin wanaagsan sababtoo ah xumaanta xusuusta gudaha ama SD halka ay sawiradu ku yaalliin.
Developer: Buluug buluug PI
Soo Celinta Sawirada
In kasta oo ay run tahay in geeddi-socodka dib u soo kabashada ee sawirrada dhaawacmay ama la tirtiray uu yahay mid gaabis ah, codsigan Waa mid ka mid ah kuwa na siiya natiijooyinka ugu fiican. Marka Soo Celinta Sawiradu bilaabanto, codsigu wuxuu sameeyaa baaritaan dhammaystiran dhammaan xulashooyinka xusuusta ee qalabku leeyahay, gudaha ama dibedda. Si ka duwan barnaamijyada kale ee u baahan rukhsadda xididka, Soo Celinta Sawirka waxay qabataa shaqo aad u fiican iyada oo aan loo baahnayn.
Soo Celinta Sawirada Sawirka
Soo Celso Sawirada La tirtiray
Soo kabashada sawirada la tirtiray ma ahan oo kaliya inay noo ogolaadaan inaan iskaanka u dhigno gudaha terminalkeena si aan u raadino sawirro aan awoodnay inaan si qalad ah u tirtirno, laakiin sidoo kale waxay daryeeshaa soo saarista dhammaan sawiradaas oo ay waxyeelleeyeen xaaladda qaybta xusuusta way ku yaalliin. Sida codsigii hore, waxay la jaan qaadi kartaa dhamaan qaababka muuqaalka umana baahna rukhsad rujin wakhti kasta si ay u awoodaan inay qabtaan shaqadooda, shaqo taas oo si wax ku ool ah u qabata.
Codsiyada lagu dayactirayo sawirrada kharribmay ee iPhone-ka
Nidaamka deegaanka ee wareega ee Apple waligiis laguma sifeyn mid ka mid ah kuwa ugu furan suuqa, waana wax iska soo horjeeda. Inaad awood u yeelatid helitaanka asalka qalabkeena waa hawl harsan hoos u dhacday oo kaliya kuwa isticmaala ee fuliya JAILBREAK qalabkaaga, JAILBILY taasoo sii adkaaneysa in la gaaro, maaddaama inta badan kharibayaasha u heellan shaqadan ay aadeen waaxda gaarka loo leeyahay si ay uga helaan abaalmarin howlahooda cilmi baarista si ay ugu helaan u nuglaanta nidaamka. Xaddidnaanta ay na siiso awgood, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno si aan uga hortagno inaan dhibaato ku qabno qalabkeenna oo aan ka soo kaban karin sawirrada aan ku dul hayno, waa adeegsiga adeegga kaydinta daruurta ee daryeela nuqul ka samee sawir kasta iyo muuqaal kasta oo aan sameyno.
Suuqa dhexdiisa si dhib leh ayaan uga helnaa codsiyo noo oggolaanaya ama ugu yaraan sheeganaya inay noo oggolaanayaan inaan ka soo kabanno xogta iPhone-keena haddii ay joojisay inay si sax ah u shaqeyso. EaseUS MobiSaver, waa codsi la bixiyay, laakiin taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan isku dayno nooc bilaash ah, oo aan ku awoodno ka soo cesho nooc kasta oo macluumaad ah aaladdayada Apple Ilaa iyo inta aysan waxyeello weyn iyo in kombuyuutarradeena ama Mac-na ay aqoonsan yihiin markaan furaynayno, xitaa haddii shaashadda aysan kaliya daarin ama na siinaynin waxqabadyo. Thanks to EaseUS MobiSaver waxaan ka soo kaban karnaa sawirada iyo fiidiyowyada, xiriirada, taariikhda wicitaanka, calaamadaha Safari, fariimaha, xusuusinta, qoraalada ... Markaan ku xirno iPhone, iPad ama iPod taabashada kumbuyuutarkeena, dalabku wuxuu na siin doonaa laba kabasho. xulashooyinka: laga bilaabo iTunes-ka (oo ay tahay inaan horey u sameynay) ama si toos ah qalabkeena.
Soodejiso EaseUS MobiSaver
Ma ogtahay barnaamijyo badan oo loogu talagalay dayactir sawirada burburay? Keebaad si guul ah u isticmaashay? Noo sheeg wax ku saabsan khibradaada iyo nidaamka aad raacday si aad uga soo kabato sawirro waxyeelo soo gaadhay sabab kasta ha noqotee.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Dayactir sawirada burburay
waxtar badan oo macluumaad leh
Faa’iido Cajiib ah! Sawiradayda badan ee jpg ayaa la helay.
Jawaab Albert Costil
Hello Albert, midkee ayaad ku soo ceshan kartaa?
Ku jawaab Pao
BARNAAMIJKAN OO AAD KU HELISAY MAGAALADAADA. MAXAA IGU DHACAYA IN AAD KELIYA ARAGTAY NUQA MUUQAALKA, INTA KALE WAA MIDAB MID AH.
midna ima adeegin. Sawirradu way waxyeeloobeen markii aan dhigay kaarka sd-ka kaamirada kumbuyuutarka, wuu burburay waana inaan la soo baxaa, markii aan dib ula xiriiray sawiradu way waxyeeloobeen. daawadayaasha muraayadaha windows wuxuu ii sheegaa sawir aan ansax ahayn.
Ku jawaab riki
Riki isla waxbaa igu dhacay, my micro sd ayaa waxyeeleeyay sawiradayda iyo fiidiyowyadayda, oo lagu ansixiyay barnaamijyo badan laakiin dhammaantood waa inay ka soo kabtaan sawirro la tirtiray si aysan uga soo kaban sawirro ay waxyeeleeyeen micro sd .. Haddii qof garanayo sida loo dayactiro sawirrada burburay , i caawi. Waa sawirrada dhalashadii labadayda wiil ee aan awoowaha u ahay aad baan u qaddarin lahaa
Riki isla waxbaa igu dhacay, my micro sd ayaa waxyeeleeyay sawiradayda iyo videos, waxaa lagu tijaabiyay barnaamijyo badan laakiin dhamaantood waa inay ka soo kabtaan sawiro la tirtiray si aysan uga soo kaban sawiro ay waxyeeleeyeen micro sd .. Hadii qof ogyahay sida si loo dayactiro sawirada burburay, i caawi .. Waa sawirada dhalashadii labadayda caruur ee aan awoowga u ahay aad baan u qadarin lahaa
Waad salaaman tihiin, isla wixii kugu dhacay oo kaliya ayaa ku dhacay sawirada kaarka si aad ugu wareejiso kumbuyuutarka, dib ayey u bilaabatay kaligeed mana furi karo sawirada, kumana xirna inta barnaamij ee aan waxba qaban, waan ka xumahay, waad heshay barnaamij lagu soo ceshado sawiradaada, waan ku qanacsanahay hadii aad i caawin karto, mahadsanid
Jawaab Carmen Rosa
Waad salaaman tahay, kiiskeyga, sawirradu waxay ku furan yihiin daawadeyaasha daaqadaha laakiin nabarada ama cawrada ayaa ka muuqda sawirrada, taasi waa waxa aan u baahanahay laakiin barnaamijyada midkoodna ma xalliyo
Aniga oo ah inaan dib uoersr sawiradayda siiyo waxaan u siiyay inuu u guuro kaarka xusuusta ka dibna sawiradu waxay la soo baxeen calaamadda amiracion iyo madow iyo x xabo oo aan samayn karo.
Ku jawaab luis miguel copa arias
4 codsiyo bilaash ah, laakiin iska jir, waa inaad iibsataa liisanka lacag bixinta si aad ugu isticmaasho xD
Dhammaantood waa la siiyay, midkoodna bilaash ma ahan, dhammaantood waa inaad bixisaa oo intaas waxaa sii dheer, waxay u badan tahay inaysan waxtar lahayn ...
200 MB OO BILAASH AH XOGTA BILAASHKA SD EE BARNAAMIJKA AAD UGU WANAAGSAN WAANA JIRO MID KALOO KALE OO SIDOO KALE LAGU QAADO SOFTONIC OO KUUGU SAMEEYSA IN AAD KA SOO CELISO 200 MB IN KA BADAN. LABADA BARNAAMIJ AYAA KU JIRA SOFTONIC.
Ku soo jawaab SANTIAGO
Olympus OM-D E-M10 Mark III, retro taabashada oo ku habboon safarka